Warshadaha iyo macdanta, dekedaha, goobaha dhismaha - Hengyi Electrical Co., Ltd.
Sannadihii ugu dambeeyay, shirkadaha dekadaha dalkeenu waxay qaateen wax badan oo ah hagaajiyaha SCR iyo qalabka beddelka SCR. Tani waxay keentay in si weyn hoos loogu dhigo tayada qaybinta awoodda. Waxa taas ka sii daran ayaa ah taxanaha ama resonance isbarbar socda oo ay sameeyeen isku-dheelitirnaanta sare ee ay soo saareen aaladahaan iyo falcelinta nidaamka awoodda iyo carqaladeynta nidaamka ee shabakadda qaybinta korantada iyadoo la raacayo xaalado gaar ah, taasoo dhalisay burbur aad u xun oo ku yimid qalabka qaarkood. Waxyeellada is -waafajinta ee nidaamka qaybinta awoodda dekadda ayaa soo jiidatay indhaha dadka. Waa degdeg in la xakameeyo iswaafajinta oo la hagaajiyo tayada qaybinta awoodda.
Sababtoo ah adeegsiga wiishashka albaabka ee beddelaya xawaaraha sare ee dekadaha, aaladaha magdhowga awoodda wax-ku-oolka ee caadiga ah looma isticmaali karo magdhawga qodobka awoodda. Harmonics -ka ka gudbaya fiilooyinka iyo wareejiyayaasha ayaa sababa khasaare sii kordhaya, iyo khasaaraha firfircoon ee isticmaala ayaa kordha, taas oo u baahan biilal koronto oo badan. Intaa waxaa dheer, ganaaxyada dulsaarka dulsaarka ah oo u dhexeeya 10,000 ilaa 20,000 ayaa bil walba la qaataa. Iyada oo ay jirto xaalad si xoog leh ugu doodaysa keydinta tamarta iyo dhimista isticmaalka, sayniska iyo farsamada iyo ilaalinta deegaanka, dekeddu waxay maalgelisay waqtigeeda maalgelin si kor loogu qaado tayada korontada.
Ka dib markii la rakibay aaladda magdhowga awoodda ka-hortagga firfircoon ee ka-hortagga harmonic, celceliska awoodda korantada ayaa gaartay 0.95, waxa ku jira is-waafajinta ayaa si weyn hoos loogu dhigay, saamaynta keydinta tamarta ayaa iska cad, tayada awoodda nidaamkana si weyn ayaa loo hagaajiyay.